Lapho kuzalwa umntwana, njalo umama izama ukunikeza izingane zabo okungcono konke. Futhi akusiwona nje izinto. Bese abazali ngokuvamile bayalibala ngabo ushintshele ngokugcwele ingane.
On iphupho ngokuhlanganyela
Eqinisweni, akukho okuhle noma okubi e iqiniso lokuthi ingane ilale nabazali. Indlela wean a imvuthuluka na? Lona umbuzo ezingavela emva onyakeni wokuqala wokuphila, lapho ingane iye esekhulile futhi babe ukuzimela, iphupho lakhe ubukele ngokugcwele, futhi umama banquma ukuthuthela kuye izilalele embhedeni wayo. Nokho, lapho kuphakama inkinga yokuba umlutha. Lo mntwana usumdala ngokwanele ukuba ukuqonde ukuthi kwakwenzekani, uqala ukumelana naso. Indlela yokwenza izinto ezilungile, ngaphandle kwalimala encane yakhe?
Rule 1: Isikhathi
Uma ingane ilale nabazali, indlela wean kuye kuwo? Iseluleko sokuqala ukukhetha isikhathi esifanele. Uma umama nengane wayelele ndawonye wayekwenza kusukela ekuzalweni, ngeseluleko abezenhlalakahle, ukuthumela imvuthu embhedeni wami akufanele ngaphambi ngineminyaka emithathu ubudala, nakabekwa kuba ezimele futhi waqala iziveze behlukile ungubani yomzali. Nokho, le migomo akuzona esiqinile. Zingashukumisela kwelinye noma ngenye indlela. Ngokuqondene sikhathi, asikho isidingo ukuba yawoyise ingane embhedeni wakhe phakathi kokugula kwakhe, teething noma omunye sikhathi sezinkathazo (ukuzalwa umzalwane-udade, ezihambayo, nokunye. D.), Ngoba ngalesi sikhathi futhi ngakho-kid nesikhathi esinzima.
Ukubusa 2. Amagama
Yini okumele uyenze uma ingane ilale nabazali? Indlela wean a imvuthuluka na? Kulesi simo ingane kuyadingeka ukuze siqonde ukuthi kungani umama enza. Kuyadingeka ukwethula agumenti wengane ngobudala, ukuze bayiqonde ngaphandle kwezinkinga. Nanoma ingane kungenziwa okuxoxiswene, kodwa kumelwe bakwazi ukukwenza.
Rule 3. olele
enye Ungamenza kanjani umehluko uma ingane ilale nabazali? Indlela wean ingane yakho kulokhu? Kuyadingeka ukuba ulungiselele kahle embhedeni imvuthu. Kufanele kube ukhululekile, enhle, futhi okubaluleke - kuhle kwengane. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ingane kuyovela isithakazelo, isifiso ukuzama into entsha. Kulokhu, Izindawo yengane indlwana kungaba buhlungu.
Rule 4. umama olandelayo
Njengoba izingane ukulala nabazali? Macala mabili, ekubeni ukuxhumana isikhumba-isikhumba njalo. Futhi ekuqaleni, ukuthunyelwa emkhakheni ingane kungenziwa wadabuka kakhulu. Ngakho-ke, umama kufanele kube njalo. Kodwa manje loxhumana egcwele umzimba wonke esikhundleni, bathi, ngesandla esisodwa. Uma ingane whimpering ebusuku, umama akusho ngokushesha ubambe izingalo zakhe ukumduduza. Kuyoba ngokwanele ukuba alwele ukufinyelela amalungelo enkonzo bese uwambambatha imvuthuluka ngemuva. Ngakho izinyane uyozizwa umama uhlobo like inombolo, kodwa kuyodingeka ukulala ngokwehlukile.
Rule 5. yomiselela
Kungani ingane ilale nabazali? Ngakho umama ngonyaka wokuqala wokuphila imvuthu lula kakhulu ukubhekana nakho ubuthongo unconfigured ebusuku, ukuncelisa, ezolile. Kid Ufika esetshenziswa, ukuthi eduze kwakhe njalo umzali oyintandokazi. Ngakho-ke, sizama ukuthola umama esikhundleni phakathi kwe ingane embhedeni - amnike abanye amathoyizi, ngakho wayengacabanga ukulala naye.
Futhi ngempela ngifuna ukubuza abazali abafisa ukuba bathuthele ingane izilalele embhedeni wayo, hhayi ukuba asabise imvuthuluka izindaba ezingadingekile futhi horror izindaba. Futhi, ningawenzi ukuya iqhinga, ngokubeka ingane vala kwakusihlwa bese ukuguquguquka ke embhedeni wakhe. Ngakho ingane ingase bengasamethembi abazali, futhi igcwele nenqubo enzima ka ngilale. Futhi akudingeki ukuya izinyathelo ezinqala, okubangela ingane ukuzumeka bebodwa, umane kokuvala ukukhanya futhi yaphuma ekamelweni. Le ndlela yokufaka izingane ngakho akulula, kodwa ngemva co-ingalali akuvunyelwe nhlobo.